ပင်မစာမျက်နှာ » NOTICIAS » သတင်းလွှာ » ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လများ၏အစည်းအဝေးတွင်တွေ့မြင်➤ညှိနှိုင်းအမျိုးအစားများ
18 / 07 / 2019 08 / 06 / 2019 အားဖြင့် အန်တိုနီယို Gancedo
အဆိုပါ zoom Video Conferencing တွေအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ အသုံးပြု. ကို virtual နည်းလမ်းဖြင့်ကျင်းပသည့်ဧပြီလ 20 2019 နိုင်ငံများကညှိနှိုင်းအမျိုးအစားများ ၏ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ဘို့ II ကိုကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ.
သူတို့ကဆက်သွယ် node များပါဝင်ခဲ့နှင့် / သို့မဟုတ် 44 တိုင်းပြည်အစီရင်ခံစာများစုစုပေါင်းစေလွှတ်ခဲ့သည်။
အထွေထွေက်ဘ်, ကြေးနန်း, RRSS, etc
နောက်တစ်ခုကို virtual အစည်းအဝေးကို။
node များနှင့် / သို့မဟုတ်ပေးပို့ခြင်းအစီရင်ခံစာများသင်တန်းသားများ:
ဥရောပ: စပိန်, ဂျာမနီ, အိုင်ယာလန်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်, ဆွစ်ဇာလန်, ဆလိုဗေးနီး, ဘော့စနီးယားအိပ်ချ်, ခရိုအေးရှား, ဆားဘီးယား, ဂရိ, အီတလီနှင့်ဗာတီကန်။
အာဖရိက: မော်ရိုကို, Mauritania, ဆီနီဂေါ, ဂမ်ဘီယာ, မာလီ, ဘီနင်, တိုဂို, နိုင်ဂျီးရီးယား, ကွန်ဂို။
အမရေိ: ကနေဒါ, မက္ကဆီကို, ဂွာတီမာလာ, ဟွန်ဒူးရပ်စ်, ဘေလီဇ်, အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ, C. ရီကာ, ပနားမား, ကိုလံဘီယာ, ဗင်နီဇွဲလား, ဆူရာနမ်, ဘရာဇီး, အာဂျင်တီးနား, အီကွေဒေါ, ပီရူး, ဘိုလီးဗီးယား, ချီလီ။
အာရှ, Oceania နှင့်သြစတြေးလျ: အီရတ်, ဂျပန်, နီပေါ, အိန္ဒိယ, သြစတြေးလျ။
စုစုပေါင်း: 44 နိုင်ငံပေါင်း။
ဒါဟာမြို့ကြီးများ 75 193 နိုင်ငံများရှိကနဦးလှုပ်ရှားမှုများရှိသည်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။
1 စပိန်: မက်ဒရစ်-ဆီဗီလာ-ဂါ-Cadiz
1.1.1 28 သို့မဟုတ် 29 စက်တင်ဘာ: နဲ့ Eva-Space ကို Arganzuela ရပျကှကျ
1.1.2 ပလာဇာမြို့တော်ဝန်နှင့်ပလာဇာ Cibeles စပိန်အတွက်ချီတက်ပွဲ၏ဧည့်ခံဘို့အဆောက်အဦးသို့မဟုတ်
1.1.3 အောက်တိုဘာမှ 1 20 (20 ရက်)
1.2.1 2018 ။ အမျှအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ presentation ။ အိမ်နီးချင်းအမျှ။ ဖိုရမ် Popolis Feáns, စာကြည့်တိုက် Civic C. Monte Alto, စာကြည့်တိုက်Castrillón,
1.2.2 2019 ။ အဆိုပါ Civic Center က Os Mallos မှာကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လတင်ဆက်မှု
2 အာဖရိက - ၁၇ နိုင်ငံ - မြို့ကြီး ၂၄ မြို့
2.2 စပိန်: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura ။
2.2.1 အောက်တိုဘာလ-2019: Canarias များအတွက်ကမ္ဘာ့မတ်လသွား။
3 အမရေိ: 22 နိုင်ငံ - 85 မြို့ကြီးများ
3.10.1 Barrancabermeja (Promoter မန်နေဂျာအန်သိုနီအီးနှင့် Melba)
3.10.2 Medellin (အီးကမကထနှင့်မန်နေဂျာ Elex ဂလိုရီယာ)
3.10.3 Cali-Popayan-Pasto-Cartagena-Tunia-Cucuta Bucaramanga-Ipiales-အာမေးနီးယား-Neiva (10 မြို့ကြီးများ)
3.11.2 ဤအလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ Manta
3.14.5 convergence လမ်းကြောင်းများ
3.14.10 social networking
3.14.13 အကျိုးစီးပွားများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်ပဋိပက္ခများမှမြင်ကွင်း Give
3.14.14 Key ကိုစိတ်ကူးများနှင့် themes များက၎င်း၏တန်ရာအပေါ်တိုင်းပြည်အားဖြည့်ရန်
3.14.15 စီးပွားရေးနှင့် Self-ငွေကြေး
4 Oceania-Australia-Asia - နိုင်ငံပေါင်း ၇ ခုနှင့်မြို့ကြီး ၁၇ မြို့
4.9.3 ဖြစ်နိုင်လျှင်အဆိုပါ core ကိုအဖွဲ့သည်အခြားမြို့ကိုရွှေ့မည်။
4.9.4 Sudhir နှင့် Nailesh နီပေါအတွက်အခြေစိုက်စခန်းရေးအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ရန်နှစ်ဦးစလုံးလျှင်ဒါဟာအကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်
4.10.2 မွန်ဘိုင်း - အိန္ဒိယ
5 ဥရောပ - ၂၉ နိုင်ငံ - မြို့ကြီး ၅၇ မြို့
5.8.1 East-West လမ်းကြောင်း
5.8.3 နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေလမ်းကြောင်း convergence
5.8.4 base အသင်း
5.10 မြေထဲပင်လယ်: ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ပင်လယ်ပြင်။
5.11.2 အခြားအုပ်စုများနှင့်အများပြည်သူနှင့်အတူသြဂုတ်လနှောင်းပိုင်း 2019 အတွက်
6.1 web ကို
6.1.2 ကျနော်တို့ကို web ၏လက်နက်ကိုင်အဆင့်ပြီးသွားကြသည်။ ဤအဆင့်ပြီးသွားချိန်ကျွန်တော် RRSS ၏ဆောင်ပုဒ်လျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။
6.2.2 WhatsApp ကို
6.2.3 Facebook က
6.2.4 Instagram ကို
6.3 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်း၏အောက်ပါအမျိုးအစားများကိုဆှေးနှေးဖို့ Next ကိုကို virtual အစည်းအဝေး
El ကမ္ဘာ့2ªMarcha၏ LAUNCH ဒါဟာမက်ဒရစ်အတွက် 23 သို့မဟုတ် 24 စက်တင်ဘာလထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည်။
အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအဘို့အခနျး Cibeles အဆောက်အအုံဒါမှမဟုတ် CASA de la Panaderia ဖြစ်နိုင်သည်။ အရှည်မှ 12 14 (2h) ။
ကမ္ဘာ့ဖလား2ªMarchaအဆိုပါ 28 စက်တင်ဘာလထောကျပံ့ဖို့စက်ဘီးခရီးစဉ်၏ခရီးသွားဘို့ Mobility ကိုထောက်ခံကြောင်း။
(EBA) ။ Legazpi 28 ဖို့တစ်ရက်9/ 11 စွန့်ခွာခြင်းနှင့်အခြားနှစ်များတွင်ပြုသကဲ့သို့, Arganzuela ၏ခရိုင်၏ခရီးစဉ်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
28 သို့မဟုတ် 29 စက်တင်ဘာ: နဲ့ Eva-Space ကို Arganzuela ရပျကှကျ
ကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများထံမှအုပ်စုများနှင့်အတူဂီတ / ပြဇာတ်ရုံ / gastronomic ခရီး (အာဖရိကနှင့်အမေရိကန်တောင်ပိုင်းအုပ်စုများရှိပါတယ်) ။
လူ့သင်္ကေတစာသင်ကျောင်းစပိန်: အ2နှင့် 8 အောက်တိုဘာလအကြား။ အဓိကမြို့ကြီးများအတွက်နိုင်ငံတကာကမ်ပိန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအမျိုးမျိုးရှိခြင်း
2 အောက်တိုဘာလ: ရပ်ကွက်ကနေမြို့လယ်မှခရီးစဉ်များအတွက်ခွင့်ပြုချက်, 16 မှာစတင်: 00h:
Plaza Atocha - Calle Atocha - Antón Martin - ပလာဇာ de la Provincia - ပလာဇာမြို့တော်ဝန် 1,5 km ။
ပလာဇာEspaña - Calle Bailen - Calle မြို့တော်ဝန် - ပလာဇာမြို့တော်ဝန် 1,4 km ။
Puerta de Alcalá - Cibeles - Seville - Sol - Calle Mayor - Plaza Mayor 1,8 km ။
ပလာဇာမြို့တော်ဝန်နှင့်ပလာဇာ Cibeles စပိန်အတွက်ချီတက်ပွဲ၏ဧည့်ခံဘို့အဆောက်အဦးသို့မဟုတ်
18: 30 ဧည့်ခံရပ်ကွက်နိမ်ရောဓ။ ကျနော်တို့ဖျော်ဖြေပွဲပြုမူခြင်းနှင့်စင်မြင့်ဖို့လိုတယ်။
19: 30 ငွိမျးခမျြးရေးနှင့် Non-အကြမ်းဖက်မှုများလူ့သင်္ကေတ။ နှစ်ထပ်ကိန်းအတွက်လုံလောက်သောအာကာသ။
20: 00 video-မူလစာမျက်နှာ
20: 30 ဂီတသမားများနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲသေးငယ်တဲ့ခြေရာအားဖြင့်ဖျော်ဖြေ။ အသွင်အပြင်၏နိုင်ရန်အတွက်ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားအမည်များ: အသားနှင့်အရိုး, ကိုက်, Leonor Watling, Rozalénအစ်ရှ်မေးလ် Serrano, Jorge Drexler, Langui, Macaco ။
အောက်တိုဘာမှ 1 20 (20 ရက်)
“ အကြမ်းမဖက်ခြင်းဆိုင်ရာရည်ညွှန်းချက်များ” မှအဖွဲ့များဖြစ်သောဂန္ဒီ၊ ML King၊ Silo …
စိန်နှစ်လုံးပါသည့်အမျိုးသမီးများ၏ပြပွဲများ - "ဒဏ်ရာများ"၊ "အခြားတစ်ဖက်သို့ကြည့်ပါ"
မတ်လ II ၏ထွက်ခွာသွားအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်တစ်ရုပ်တုသို့မဟုတ်ပြားတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှသောအရပ်။
အယ်လ် Matadero အာကာသတင်ပြသည်။ ဖြစ်နိုင်ရင်ဝင်ပေါက် rotunda ပေါ်တံခါးကိုရင်ပြင် Legazpi ပြီးနောက်။
ဒီ Square ကိုစီးစကိတ်ကွင်းမက်ဒရစ်မြစ်ပေါ်တွင်မဖြစ်နိုင်ပါလျှင်။
တစ် ဦး ကCoruña
2018 ။ အမျှအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ presentation ။ အိမ်နီးချင်းအမျှ။ ဖိုရမ် Popolis Feáns, စာကြည့်တိုက် Civic C. Monte Alto, စာကြည့်တိုက်Castrillón,
Shelter ဖို့ဖြစ်ရပ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုများအတွက် Acampa နှင့်ညာဘက်ငြိမ်းချမ်းရေးလူ့သင်္ကေတ။
ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လအပေါ်စစ်ပွဲများမရှိပဲကမ္ဘာ့ဖလား Leafleting ။
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၏ screening Bibli ထဲမှာ "Tupac Amaru တစ်ခုခုပြောင်းလဲနေပါတယ်" ။ Castrillón။
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် "Samba, ဖျက်နာမည်တစ်ခု" အဖြစ်။ Vecinal Agra ၌တည်၏။
ဟောပြောချက် - Castrillónစာကြည့်တိုက်မှနျူကလီးယားလက်နက်များဆွေးနွေးခြင်း။
Agra ရပ်ကွက်အတွင်းအသင်းအဖွဲ့အတွက်အမြဲတမ်းကောင်စီ Active ကိုအကြမ်းမဖက်၏တင်ပြချက်။ ရီကာဒို Lucero အားဖြင့်
2019 ။ အဆိုပါ Civic Center က Os Mallos မှာကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လတင်ဆက်မှု
Colegio Fernández Latorre (ကျောင်းသားနှင့်အိမ်နီးချင်း ၆၀၀)၊ ဟောပြောချက် -“ အကြမ်းဖက်မှုမှလွတ်မြောက်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်လူမှုရေးလိုအပ်ချက်” Philippe Moal ။
အကြမ်းမဖက်ဖိုရမ် Propolis အသင်းအဖွဲ့အပေါ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ။
Ethical ကတိသစ္စာပလာဇာက de María Pita (300 ကျောင်းသားများ) ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းလူ့သင်္ကေတ။
နျူကလီးယားလက်နက်များ၏တားမြစ်၏သဘောတူညီချက်ရေးထိုး၏ Motion ၏မြူနီစီပယ်ကောင်စီအတည်ပြုချက်။
အဆိုပါဖိုရမ် Propolis အသင်းအဖွဲ့မှာအကြမ်းမဖက်အလုပ်ရုံ။
A Coruña၏စီးတီး၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကြေညာစာတမ်းကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ဘို့မတ်လနှင့်2A Coruñaအတွက် Active ကိုအကြမ်းမဖက်၏နေ့အဖြစ်အောက်တိုဘာလကြေညာ2ªလိုက်နာရန်။
Sphera အကယ်ဒမီအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ presentation ။
Agra ရပ်ကွက်အတွင်းအသင်းအဖွဲ့အတွက်က Non-အကြမ်းဖက်မှုအပေါ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ။
26 ဧပြီလ 2019 အဆိုပါ Paseo Maritimo အပေါ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ဘို့ School တွင်လူ့ Chain 8 3.500 ကျောင်းများနှင့်ကြောငျးသားမြား၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ။
9 နိုင်ပါစေ: Ventorrillo ၏အိမ်နီးချင်းအစည်းအရုံးအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ presentation ။
6 ဇွန်လ: အဆိုပါ Sagrada Familia လူမှုရေးစင်တာခေါ်ဆိုခအတွက်မြို့၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အသင်းအဖွဲ့များ။
ဇွန်လမှ 21 23: Acampa အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအကြမ်းမဖက်အတူ Shelter မှငြိမ်းချမ်းရေးဆုနှင့်ညာဘက်အဘို့အရပ်တယ်။
စက်တင်ဘာလ 5: အဆိုပါ Civic Center ကဟောငျးမြို့ခေါ်ဆိုခမှာမြို့များ၏2ªအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသင်းအဖွဲ့များ။
2 အောက်တိုဘာလ: ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ဘို့မက်ဒရစ်2ªကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လလူ့အဆိုပါပလာဇာက de María Pita အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတများနှင့်နေအိမ်နှင့်အတူ streaming များဆက်သွယ်မှုကို
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် amosar ဏ Seu ost rexeitamento အကြမ်းဖက်မှုများအတွက်နောင်တမှ 3.500 ကျောင်းကိုMáisCoruñaပုံစံ unha လူ့ Cadea ၏မြို့မှာရှိတဲ့ကျောင်းများအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးလူ့သင်္ကေတအဘို့အအဆိုပြုချက်ကို။
အာဖရိက - ၁၇ နိုင်ငံ - မြို့ကြီး ၂၄ မြို့
မော်ရိုကို၏အရှေ့ပိုငျး၏ခရီးစဉ်အတွင်းနှင့် Miloud နှင့် Azzedine ကစီစဉ်သည့်လှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့် Martine ။
အမျိုးမျိုးသောအုပ်စုများနှင့်အဆက်အသွယ်များ (စာရင်းအပေါ်တင်သွင်းသောအစီရင်ခံစာကိုကြည့်ပါ) လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အဆိုပြုချက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်သင့်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအမျိုးအစားများ, ၏ဤမူဘောင်အတွင်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့ကြသည်။
စပိန်: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura ။
အောက်တိုဘာလ-2019: Canarias များအတွက်ကမ္ဘာ့မတ်လသွား။
ဤနေရာတွင်များအတွက်ကမ္ဘာ့မတ်လ၏ကျမ်းပိုဒ်၏အားသာချက်ကိုယူပြီးကျနော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆုများအတွက်ပထမဦးဆုံးဖိုရမ် Canario ပညာရေးဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့မြှင့်တင်ပါလိမ့်မယ်။
Nouaktchot, Rosso ။
သူတို့ဟာ3ကို virtual အစည်းအဝေးများပါဝင်ခဲ့ကြပါပြီ။
snt ။ လူးဝစ်, Dakar, Ile က de ဂိုး။
Dakar ခုနှစ်, Keba Diop သုံးကျောင်းများဆက်သွယ်မေးမြန်းရာနှင့်လူ့သင်္ကေတများဖွဲ့စည်းအတွက်အကြမ်းမဖက်တဲ့နေ့အဘို့အတူတူသူတို့ကိုရောက်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့သည်။
အခြားပါဝင်: Ndiaga DIALLO အစည်းအရုံး Diretti humani, Cheikh DIOP, Samba X ကိုThéâtre sensibilisation, papi BADJI ။
သူတို့ကတစ်ဦးချက်တင်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါပြီ။ ညှိနှိုင်းအမျိုးအစားများအပေါ်သတ်မှတ်ခံရဖို့လှုပ်ရှားမှုများ။ Mamut Jang
ဒီအသင်းနှစ်နိုင်ငံတစ် Twin အားဖြင့်နှစ်လဘီနင်နှင့်တိုဂိုယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်အကြမ်းမဖက်လုပ်ဆောင်ချက်၏အခြေခံမူများအသိပညာပေးခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
မီဒီယာပျံ့နှံ့နေရာများ Non-အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ကမ်ဘာပျေါတှငျငွိမျးခမျြးရေးမွေးမြူဖို့ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ရပ်များမွှုပျနှံဖို့ Sensitize ။
ပြီးသားပူးတွဲ Abuja အတွက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပြင်ဆင်ထားရန်အာဖရိကအမျိုးသားလူငယ်နှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအဆက်အသွယ်ထူထောင်ကြပြီရည်ရွယ်ချက်မှတ်ချက်။
Pauline KASANGU လူဘွန်ဘန်ရှီ။
သူကတစ်ဦးချက်တင်ခန်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ကွန်ဂို DRC ပေါ်ဤအကြောင်းမှတ်ချက်များကိုစေလွှတ်ထားပါတယ်:
သို့သော်ဒေတာ (+ စာဖြင့်ရေးသားပုံများပါ) လူဘွန်ဘန်ရှီအနည်းဆုံးမွို့၌မှန်မှန်စေလွှတ်သောစိတ်ချပါ။
ကျနော်တို့ကတခြားကွန်ဂိုမြို့ကြီးများကျွန်တော်တို့ကို join နိုင်သည်ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။
မိုဇမ်ဘစ်: သူတို့ကသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ပါ။ ငါ Remigio CHIALAUE ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ကင်ညာ: တစ်ချက်တင်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့။ ဘင် Oko: သူတို့ကသတင်းအချက်အလက်စေလွှတ်
အမရေိ: 22 နိုင်ငံ - 85 မြို့ကြီးများ
ညှိနှိုင်းအမျိုးအစားများ၏မူဘောင်အတွင်းကမ္ဘာ့မတ်လရဲ့ Network လက်တင်အမေရိက၏အဆင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုအဖွဲ့များကဒီမှာကြီးပြင်းလာလိမ့်မည်။
ရေးအဖွဲ့ရေးသားသူ: Pablo Acevedo နှင့်ဂါဗြေလ Vergara ။
ဧပြီလ 2018 ငါတို့သည်အစားထိုး၏နွေဦးရာသီများတွင်အဖြစ်အပျက်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။
အဲဒီမှာကျနော်တို့ (40) သက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေကို 40 စုဆောင်း။
ကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအများအပြားအီးမေးလ်များကိုပေးပို့နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်မေတ္တာရပ်ခံနှင့်ပဋိပက္ခ resolution ကိုအပေါ်သဘောတူလို့ချေါတဲ့လူမှုရေးဂိမ်းကိုအားပေးအားမြှောက်။
မြို့နှင့် Periscope ပြဇာတ်ရုံထဲမှာပြဇာတ်ရုံအုပျစုမြားပေးပို့ဖို့ဖိတ်ကြားလွှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
သူတို့ချီတက်ပွဲ၏ကျမ်းပိုဒ်များအတွက်လှုပ်ရှားမှုများစုစည်းဖို့သူတို့ရဲ့မီဒီယာဖိတ်ကြားချက်ကိုအတွက်ထုတ်ဖော်ရန်သူတို့ကိုတောင်းဆိုနေတာအတော်ကြာအဖွဲ့အစည်းများ postsecondary ကျောင်းသားများအားအီးမေးလ်များကိုစေလွှတ်ပြီ။
သူတို့ဟာအချို့သင်တန်းသားများအကြား Flyer ဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။
စနေနေ့ 27 /4နောက်တဖန်အဆက်အသွယ်ရှာဖြစ်ရပ် Primavera အစားထိုးတက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
N.York, Los Angeles မြို့။ သတင်းအချက်အလက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဝါရှင်တန်အမ် Luther King အခွန်။ ဟယ်လင် Park က။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအက်စ် N. York မြို့၏ဧည့်ခံ။
စီးတီး, ဂွါ, Esquipulas ။ Mixco,
EP Alberto Vásquezညှိနှိုင်း။
Civil Society အဖွဲ့အစည်းများ, DiverArte, ရပ်ရွာဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ။
ဒါ့အပြင်ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ, နှင့်အမျိုးသား, တက္ကသိုလ် Estudiantina Universidad de San Carlos က de ဂွာတီမာလာ, မြူနီစီပယ်နှင့် Mixco ၏မြူနီစီပယ်။
ဒီခရိုင်အတွင်းရှိတပ်စခန်းရေးအဖွဲ့၏ကျမ်းပိုဒ်ကိုသေချာစေရန်, အဆက်အသွယ်ပြန်လည်အသက် Quetzaltenango ဦးစီးဌာန (က 200 ကီလိုမီတာ။ မြို့တော်မှ) သွားရောက်ကြည့်ရှု။
Chiquimula ၏မြို့တော်စည်ပင်ကခုနှစ်, မြှို့နယ်ရန်အဝင်ဝမှာ built ထိုကဲ့သို့သောကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လမော်ကွန်းတိုင်အမှတ်အဖြစ်လုပ်ရပ်များ, ကိုယ်ရေးရာဇဝင်, ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်အဆက်အသွယ်များ, ပြန်လည်စတင်နေကြသည်။
အိမ်အဖွဲ့သည်အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ, Santa Rosa de Copan ဟွန်ဒူးရပ်စ်နှင့်, La Paz ခွဲဝေမည်ဖြစ်ကြောင်းရသောအာကာသ။
ဂွာတီမာလာမှအမှုဆောင်များကတင်သွင်း identification ဥပဒေကြမ်းနျူကလီးယားလက်နက်များ၏တားမြစ်၏စာချုပ်အတည်ပြု။
SP Sula, Tegucigalpa, Pena Blanca, Copan, P. Cortes, စန်း Lorenzo ။
ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ60ªလက်ခံရရှိရန်, ဟွန်ဒူးရပ်စ်နှင့်ဂွာတီမာလာ၏နယ်စပ်ဧရိယာတွင်ကျောင်းများအနေဖြင့်ကလေးများနှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတများဆောက်လုပ်ရေးဦးဆောင်လမ်းပြမည်သူ2လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွင်။
အမျိုးသားတက္ကသိုလ် UNAH မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများနှင့်နှစ်ခုကိုပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များ၏အသင်းအဖွဲ့အမေရိကအလယ်ပိုင်းသူ၏ခရီးစဉ်အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ2ªများ၏ထောက်ခံမှုစည်းရုံး။
Omoa နှင့် San Pedro Sula ၏မြူနီစီပယ်, လူဦးရေရဲ့ကြီးမားတဲ့စည်းရုံးခြင်းနှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ2ªတွင်ပါဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်။
ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင်, တက္ကသိုလ်စန်း၏ Pedro Sula မှာသုံးတစ်ပြိုင်နက်ညီလာခံဆောင်ရွက်ခြင်း။
စန်းဆာဗေးဒေါ, San Miguel, Mejicanos, စန်တာ Tecla ။
လီယွန်, မာနာဂှာမွို့။ သူတို့ကသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိထားပါသည်။
San Jose, San Pedro က de Monte က de Oca, လိုက်ဘေးရီးယားနှင့် Heredia ။
ဗဟိုခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ: ပြော့ဖထူးအိမ်သင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှေူပာင်းလဲရေးကို, ငြိမ်းချမ်းရေးသူငယ်ချင်းများအဘို့အရေးစင်တာ။
နှင့်ဖြည့်စွက်, 11 ကျောင်းများနှင့်ကောလိပ်များ (ယခုအချိန်အထိ) အတွက်စည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ့နာကျင်မှု V ကို၏ယူနစ်အကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးလှုပ်ရှားမှု၌တည်၏။
အနုပညာနှင့်လူ့သင်္ကေတများငြိမ်းချမ်းရေးဆု 21 /9၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့။
နေ့ပွဲအကြမ်းမဖက်2/ 10 နှင့်ဒုတိယကမ်ဘာမတ်လထဲက။
"XXI ရာစုအတွင်းတပ်များ၏အခန်းကဏ္" "အပေါ်နိုင်ငံတကာဖိုရမ်။ (အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်) ။
ကလေးရဲ့ပြတိုက်၏ forecourt အတွက်ကလေးတွေနဲ့အတူ 1000 လှုပ်ရှားမှုများ။ (စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းခုနှစ်တွင်) ။
ဒီမိုကရေစီိံငြ်၏ Park မှာငြိမ်းချမ်းရေးဆုဖျော်ဖြေပွဲ။ (စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းခုနှစ်တွင်) ။
အချို့သောမြို့ကြီးများရှိအတော်ကြာကျောင်းများနှင့်ပန်းခြံများအတွက်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူ့သင်္ကေတ။ (စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းခုနှစ်တွင်) ။
အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များနှင့်စာနယ်ဇင်းအင်တာဗျူးတွေအတွက်ပါဝင်မှု, ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား။ (စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းခုနှစ်တွင်) ။
အဆိုပါ EPP နှင့် 5p.m ထံမှ CAP အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအစည်းအဝေးများတိုင်းနှစ်ပတ်၏ခွေး။
ပနားမားခုနှစ်တွင်စစ်ပွဲများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုမရှိရင်ကမ္ဘာ့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပနားမား၏ Interamerican တက္ကသိုလ်မှဖိုရမ်ကျင်းပပေးသော Belkis က de Gracia ရှိပါတယ်။
စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းနှင့်အစောပိုင်းအောက်တိုဘာလဒီနှစ်အကြား, ကျနော်တို့ (အတည်ပြုခဲ့သည်ခံရဖို့နေရာ, ရက်စွဲနှင့်အချိန်) မြို့မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်မှာဖိုရမ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဖိုရမ်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ရေးအတွက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏မူဘောင်အတွင်း၌ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အကြမ်းမဖက်ခြင်း၊ ကလေးသူငယ်များကိုလေးစားခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပနားမားအတွက်သဘာဝကိုဖိုရမ်တွင်ပါ ၀ င်သူများအားဖိတ်ကြားရန်ဖိတ်ကြားထားသည်။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနောက်ခံအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေပေးနိုင်ပြီးလူသားဝါဒမှလုပ်ဆောင်ခဲ့ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းအမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အခြားပံ့ပိုးမှုများနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဝေမျှနိုင်လိမ့်မည်။
မတ်လ Suramericana အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူကျောင်းများတွင် 40 အတူလုပ်ကိုင် Continue ။ Non-အကြမ်းဖက်မှု, ပန်းချီကားများ, ဘာသာရပ်ကိုရည်ညွှန်းရေးဆွဲ, တငျမွှောကျအလံ, ပုံပြင်များနှင့်အရေးအသားများတက်ကြွအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, ထိုကဏ္ဍတွင်ငြိမ်သက်ခြင်း၏သင်္ကေတများနှင့်ချီတက်ပွဲ။
ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတ 5000 လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်အဆိုပါပလာဇာက de Bolivar တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။
Barrancabermeja (Promoter မန်နေဂျာအန်သိုနီအီးနှင့် Melba)
Unipaz (တက္ကသိုလ်) နှင့် Sena အပေါ်ညီလာခံ။
မြို့အမှတဆင့် Long ကချီတက်အတူတူလူတွေ 2000 ။
အဆိုပါကွန်ဖရနှင့်သင်္ကေတအတွက် B က A / C တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အခြေစိုက်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖိတ်ခေါ်ပါ။
Medellín (Elex နှင့်ဂလိုရီယာတာဝန်ရှိ E. Promoter)
ပွဲတော်ကြီးယဉ်ကျေးမှု: မြို့အရှောက်သွားချီတက်ပွဲဆင်း Medellin အဖှဲ့ဟာအတွက်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကို။
Cali-Popayan-Pasto-Cartagena-Tunia-Cucuta Bucaramanga-Ipiales-အာမေးနီးယား-Neiva (10 မြို့ကြီးများ)
Barrancabermeja ထဲမှာ eb မြို့နှင့် Kolibri ပန်းခြံ၏လှုပ်ရှားမှုများအတွက်သူတို့နှင့်အတူပါဝင်ရန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုလူပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့စည်းရုံးလျက်ရှိသည်။
Andre Salazar နှင့် Marly Arévaloမက်ဒရစ်-စပိန်ကနေထွက်ခွာ eb ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အဆိုပြုခံရဖို့ချင်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တီရှပ်များ၊ နဖူးစည်းစာတန်းများ၊ နဖူးစည်းစာတန်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့်ကောလိပ်များသို့စာများနှင့်ဒုတိယကမ္ဘာချီမတ်လဖြန့်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တက်ကြွသောအကြမ်းမဖက်၏တူညီသောလှုံ့ဆော်မှုကိုက်ညီသောအစိုးရအေဂျင်စီများ, လူ့အခွင့်အရေး, ရိုးအမြစ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအဆက်အသွယ်မရ။
ကွီ, ကွိုင်ယာခေး, Manta ။
အဲဒီမှာကမ္ဘာ့မတ်လ2မြို့ကြီးများ၏အခြေစိုက်စခန်းရေးအဖွဲ့ကိုလက်ခံရရှိ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်စပ်လျဉ်း။
တက္ကသိုလ်များ: U. ကွိုင်ယာခေးနှင့် CASA Grande ၏ U. ။
Manta ၏ U. ။
အီကွေဒေါ Manta: စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းပိတ်ဘို့ Manta-အီကွေဒေါ၏မြို့အအသိအမှတ်ပြုမှု။
ဤတွင်ဗင်နီဇွဲလား, ဆက်သွယ်ရေးအတွက်တယ်လီဖုန်းနှင့်အင်တာနက်အားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးယေဘုယျအားဖြင့်, အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်ထံမှအလွန်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ကြသည်။
"ဥပမာအားဖြင့်"ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှတ်ချက်ပေးရန်,"ငါဆက်သွယ်ရေးဆဲလ်, ဒါမှမဟုတ် WhatsApp ကိုမပါဘဲနှစ်ပတ်အတွင်းရှိသည်။ ဒါများစွာသောလူ"။
ရစီးဖီ, Mina, ဆောပိုလို, Cubatãoနှင့် Caucaia ။
ရေးအဖွဲ့ရေးသားသူ: Gunther အေ, R. မားကို့စ, Jobana အမ်, အမ် Regis, Rosana ခနှင့် P. Vinicius, Rosana ခနှင့်ဖာနန်ဒို P.
ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးချီတက်, မီဒီယာအတွက် Bahia နှင့် Pernambuco အတွက်ကြီးမားသောဆန္ဒပြပွဲများကိုကြီးစွာသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းအကဲဖြတ်ရန်။
ခဏ3တထောင်ဝဘ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းလူများနှင့်လူမှုကွန်ယက်ထက်ပို။
ဤအအဆက်အသွယ်အတော်များများ 2018 အတွက်တောင်အမေရိကချီတက်ပွဲကနေပြန်လည်လျက်ရှိသည်။
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်တော်မြို့ကြီးများ2အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ5ª၏အသင်းများကိုမြှင့ရှိသည်။
သူတို့ကရစီးဖီ, Mina, ဆောပိုလို, Cubatãoနှင့် Caucaia အတွက်လှုပ်ရှားမှုများအတည်ပြုခဲ့သည်နေကြသည်။
ဒါဟာ Curitiba နှင့် Rio Grande ဖို့လည်းဖြစ်နိုင် Sul လှုပ်ရှားမှုများရှိပါဘူး။
ကျနော်တို့အားကစားရုံနှင့်ကျောင်းများအတွက်လှုပ်ရှားမှုများများအတွက် UMAPAZ ၏ဆောပိုလို၏ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ, (Universidad Livre Meio Ambient အီး da Paz ပြုပါ) နှင့် Cotia နှင့် Pernambuco ၏ပညာရေးအတွင်းရေးမှူး၏နေရာများနှင့်ကတိကဝတ်ထောက်ခံပါတယ်။
စန်း Paulo ခုနှစ်တွင်မှ / Dec, ငြိမ်းချမ်းရေးတစ်ဦးသင်္ကေတရစီးဖီဒီဇင်ဘာ 300 03 နေ့ကခန့်မှန်းမယ်လို့ 07 alumnos.La ဗဟိုလမ်းကြောင်းနှင့်အတူယဉ်ကျေးမှုစင်တာနှင့်Cubatãoမှာဖြစ်ရပ်တစ်ခုလုပ်နေတာအကြောင်းကို Sao Paulo 8 11 ပြောဆိုသော။ , Paraisópolis / Mina ရက် / Dec မှ 12 14 ။ , 15 18 မှ Caucaia / dic.Este တစ်ခုကြိုးပမ်းမှုကနဦးအချိန်ဇယားကိုချိန်ညှိရန်လိုအပ်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးများ, နေရာတွေ, ရက်စွဲများနှင့်ကြိမ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကျောင်းတွေ, gyms သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ဘောလုံးအားကစားကွင်း၌ပေးသောငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတများနှင့်အတူအဆုံးသတ်ကြောင်းကျောင်းသားချီတက်ပွဲစီစဉ်နေကြသည်။
အောက်တိုဘာလ2မှစ. ငါတို့သည်နောက်ဆုံးအသင်းကိုအခြေခံပြီးလှုပ်ရှားမှုများအောင်စတင်ရန်ကြိုတင်အားကစား, လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများတစ်အရေအတွက်ညှိနှိုင်းအတော်ကြာအမျိုးအစားများကိုအဆိုပြုလျက်, ဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါ, တစ်ဦး convergence လမ်းကြောင်းများပါဝင်သည်။ ပါလိမ့်မယ်
ဆောပိုလိုတချို့သံတမန်တို့ကိုတစ်ဦးပြပွဲနှင့်ကွန်ဖရ UMAPAZ လုပ်နေတာ၏ပုံရိပ်နှင့်အတူရှိကြ၏။
ဖြန့်ဖြူးဖို့တိုတောင်းသောဗီဒီယိုများနှင့်အစီအစဉ်များတစ်စီးရီးလုပ်ဖို့ Pressenza နှင့် 4V အစီအစဉ်နှင့်များ၏မတ်လဂီတနှင့် / သို့မဟုတ်ခိုင်မာတဲ့ရှိနေခြင်းနှင့်အတူလူဝင်မှုမိန်းမနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထား marcha.La Cultures ၏ Convergence ၏အပတ်စဉ်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ, ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများအတွက် Inmigrantes.En ရစီးဖီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများအများပြည်သူ rede လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှု: ယခုအချိန်အထိပညာရေး၏အတွင်းရေးမှူး, စည်ပင်သာယာရုံးသို့နှင့်တက္ကသိုလ်များနှင့်အတူအဆက်အသွယ်အပေါ်မှာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်။
ကျနော်တို့ Poly Institute မှ, Sou da Paz, Soka Gakkai, Unipaz နှင့်အခြားသောအဖြစ်ဘရာဇီးကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ1ªထောက်ခံပြီအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိကြ၏။
သူတို့ထဲကတချို့ကပြီးသား 2018 ကျင်းပခဲ့သောမတ်လအမေရိကန်များ၏လှုပ်ရှားမှုများပူးပေါင်းပါပွီ။
ကျနော်တို့သေးသည်ဤကိစ္စများသို့ delve ရန်အချိန်ရှိခဲ့ပေမယ့်သူတို့ထဲကတချို့၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်အတူဖြစ်ရပ်များ၏လွှမ်းခြုံစေနိုငျသောစည်းလုံးညီညွတ်မှုအိုးအိမ်နှင့် 4V ကဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်ကြပြီမဟုတ်။
ကျနော်တို့သတင်းစာထုတ်ပြန်ချက်များကိုပေးပို့ဖို့မီဒီယာများ၏စာရင်းကိုရှိသည်,6သို့မဟုတ်7ဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာမိတ်ဖက်, ဒါပေမယ့်ရှိသေးစာနယ်ဇင်းထုတ်ပြန်ပြောကြားချက်များစာရေးဆရာများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်တစ်ဦးအခြို့သောကြိမ်နှုန်းနှင့်သူတို့ကိုပို့ပေးပါ။
ညှိနှိုင်းအမျိုးအစားများအပေါ်တည်းဖြတ်ပစ္စည်းများထောက်ခံပါတယ်အဖြစ်ကျနော်တို့ SP အတွက် Pressenza အရေးအသားရှိသည်နှင့်ထောက်ခံမှု 4V လေ့လာပါလိမ့်မယ်
ဒါဟာစသည်တို့ကို2ªMarchaကမ္ဘာ့ဖလား Facebook, Twitter Instagram ကို, ဝက်ဘ်, ကြေးနန်း, များအတွက်ကွန်ရက်များကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်လိုအပ်နေပါသည်
Cubatãoနှင့် Cotia: ဒီတော့ဝေးအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းနှစ်ခုမြို့ကြီးများရှိပါတယ်။
ပထမတော့ကျနော်တို့ Paulo Freire မာရီယာ da Penha, သြဂတ်စ Boal, Chico Mende နှင့် Marielle Franco ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုအကြောင်းကိုဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
လောလောဆယ်ဘရာဇီးအတွက်သူတို့ဆင်းရဲသားတို့ကိုလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေ၏ဖိနှိပ်မှု, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထောင်ချခြင်း, လက်နက်တင်ဆောင် decontrol, ကျား, မအကြမ်းဖက်မှုများသည်စိုက်ပျိုးမှုအတွက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုအပြစ်လွတ်စေ, ရဲအကြမ်းဖက်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ပွဲ၏ပြဿနာသည်အလွန်ခွန်အားဖြစ်ကြ၏ ငါမိန့်ခွန်း, ထိန်းသိမ်းရေးသို့မဟုတ်တရားစွဲဆိုမှုအစိုးရကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်အတိုက်အခံများ၏နှင့်လယ်ပြင်၌အစွန်အဖျားများနှင့်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအတွက်အနက်ရောင်လူဦးရေ၏သတ်ဖြတ်မှုကိုမုန်း။
Key ကိုစိတ်ကူးများနှင့် themes များက၎င်း၏တန်ရာအပေါ်တိုင်းပြည်အားဖြည့်ရန်
ဒေသဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်မှာဂယက်ရိုက်တင်းမာမှုများလျော့ပါးစေရန်သို့မဟုတ်ရှိစေခြင်းငှါဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ, လုပ်ရပ်တွေကိုသို့မဟုတ်ပဋိပက္ခများ: လက်နက်များဝယ်ယူရန်ဣသရနှင့်အတူဘရာဇီးရဲ့ပူးပေါင်း။
နှင့်အမေရိကန်များအတွက် Alcantara စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်း၏ပေးပို့။
Tumbes, Piura, Lambayeque (လူတွေ Chachapoyas နှင့် Yurimaguas ကနေလာ), Trujillo, Huaraz, Lima (15 မြို့ကြီးများ) ။
ကမကထအဖွဲ့ပီရူး up ပြုလုပ်, ကားလို့စ် Degregori, လူး Mora, Mariela Lerzundi နှင့် Riccardo Marinai ။
လမ်းကြောင်း eb မြို့ရှိသမျှ၏ခရီးစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျအများအပြားအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်။
မြူနီစီပယ် (မဂ်ဂဒါလေး, Surco, Miraflores), ပညာရေးCañeteဝန်ကြီးဌာန (အုပ်စုများကျောင်းများ 300), ပီရူးစိတ်ပညာရှင်၏ကောလိပ်, မြှင့်တင်ရေးအကြမ်းမဖက်မြို့ကြီးများ, တက္ကသိုလ်များ (ရီကာဒို Palma: CASA de la Cultura Korihuasi, အမျိုးသား U. Toribio Rodriguez က de Mendoza, Tumbes အမျိုးသားတက္ကသိုလ်၏ခရီးသွားလာရေး U. Cesar Vallejo) ကျောင်း, Piura Task ကိုအုပ်စု, Lambayeque ၏ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရ, အာရီကီပါ၏ပညာရေးဒေသဆိုင်ရာရုံး, လူသားဝါဒပညာပေးကွန်ယက် Group မှယဉ်ကျေးမှု Yurimaguas ။
ပစ္စည်းများ: ထမ်းဘိုး, တံခွန်, နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ, ဖဲကြိုး, စတစ်ကာများ, လက်ကမ်းစာစောင်, Flyer, လက်ကမ်းစာစောင်များ: ပြင်ဆင်မှု၌။
မှတ်ချက်ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီမွို့တှငျမြှင့ရှိသည်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီမှာလှုပ်ရှားမှုများကိုမြှင့်တင်ရန်ညှိနှိုင်းအမျိုးမျိုးအဆိုပြုထားပါသည်။ ကျနော်တို့တက္ကသိုလ်ရီကာဒို Palma ထံမှချေးငွေပေါ်လီမာအတွက်ဗဟိုတည်နေရာရှိသည်။
လှုပ်ရှားမှုများပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောကျောင်းများနှင့် Sopocachi, La Paz ၏ဧရိယာ၌မူလတန်းကျောင်းများမှဖိတ်ကြားချက်ကိုစာပေးပို့အာရုံစူးစိုက်။ ဇူလိုင်လကတည်းကအတူတူဧရိယာထဲမှာဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစတင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ 8 ပြည်နယ်များအတွက်ဖြစ်မြောက်ရေးနဲ့အစောပိုင်းအဆင့်အဖွဲ့အစည်းကမှာဖြစ်ပါသည်: မကြာသေးမီက CABA အတွက် Salta, (Buenos Aires ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီးတီး .. )
Parque Lezama, Buenos Aires နှင့် CABA အတွက်ကွင်းဆင်းလှုပ်ရှားမှုများ .; ကြွင်းသောအရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်များနှင့်ကော်ရှာဖွေရေးဖြစ်ပါတယ်။
အသိအမှတ်ပြုမှုမိခင်များနှင့်ပလာဇာက de Mayo အဘိဓါန်၏အဘွားအကြမ်းမဖက်ရုန်းကန်များအတွက်ချမှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုလျစ်အဖြစ်။
Silo များမှအခွန်ဆက်ရ။ နှစ်ဦးစလုံးအဖှဲ့အစညျး၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်
ကျနော်တို့ပြီးသား Cordoba အတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Access ရှိသည်နှင့်ပြည်နယ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များ၏စိတ်ဝင်စားမှု၏ကြေညာစာတမ်းဆိုင်းငံ့ထားသည်။
BS အတွက်ကျူးဘား, ဗင်နီဇွဲလားနှင့်ဘိုလီးဗီးယား၏သံရုံးများနှင့်အဆက်အသွယ်။ အမျှ။ မှတ်ချက်ချနှင့် Cordoba အတွက်ဗင်နီဇွဲလားလူတို့နှင့်အတူသွေးစည်းညီညွတ်မှု၏လုပ်ရပ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေး-အသိအမှတ်ပြု Madre က de Mayo အဘိဓါန်အာဂျင်တီးနား၌တည်၏။
Mario R. Cobos ကိုရိုသေလေးစားခြင်း - အကြမ်းမဖက်ရေးတွင်သူ၏ပါဝင်ပံ့ပိုးမှုအတွက် Silo ။
P. က de Vacas: ကမ္ဘာ့ဖလား2ªMarcha၏ 1 / 2020 / 10 1ºနှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနား။
စန်တီယာဂို, Arica, Iquique, Valparaiso
အဆိုပါအယူအဆကိုအနာဂတ် edition မှာထဲတွင်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လမှဆက်လက်ပေးနိုင်ရန်အတွက်လူပေါင်းပေါင်းစပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ချီလီလည်း TPAN (နျူကလီးယားလက်နက်များ၏တားမြစ်၏စာချုပ်) ပြီးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များယခုမြူနီစီပယ်ရန်ချဲ့ထွင်အတူချီတက်ထောက်ခံမှုမြှင့်တင်ရန်။
Oceania-Australia-Asia - နိုင်ငံပေါင်း ၇ ခုနှင့်မြို့ကြီး ၁၇ မြို့
ဆစ်ဒနီကျနော်တို့ဆစ်ဒနီအတွက် WM အပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ခုစည်းရုံးရေးအလုပ်လုပ်နေကြသည်။
အဆိုပါ IWM တူသောခြေလှမ်း WM အတွက်ကမ်းခြေတခုတခုအပေါ်မှာအရေးယူ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေးတော်မူ၏။ Decler အဆိုပါမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
တိုကျို, ဟီရိုရှီးမား, Nagasaki ။
သူတို့ကအစငြိမ်းချမ်းရေး, ICAN နှင့်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ1ªများအတွက်အဆက်အသွယ်မြို့တော်ဝန်ကိုသက်ဝင်နေကြသည်။
ဂျပန်တွင်ဟီရိုရှီးမားနှင့် Nagasaki အတွက်သားကောင်များမှအခွန်ဆက်ရ။
Kabir နှင့် Tulsi Sigdel Ranjit ညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။3နှင့်အတူပိုပြီးနီပေါမက်ဒရစ်အတွက်22019 အောက်တိုဘာလဖြစ်လိမ့်မည်။
Magaj bd Panthi နှင့် Sharada Prashad Dhital eb မက်ဒရစ်လမ်းကြောင်းအဖြစ်အာဖရိကစေချင်တယ်။
သူတို့ကနီပေါတို့တွင်အ5နှင့် 10 စီစဉ်နေကြသည်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ 8 /3/ 2020 ရဲ့အဆုံးမှာမက်ဒရစ်မှခရီးသွားလာ။
ကျနော်တို့ကျောင်းများ, တက္ကသိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ဘို့ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လအပေါ် program တစ်ခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။
ခတ္တမန္ဒူ, Banepa, Panauti, Biratnagar အတွက်ကောလိပ်အဆင့်အစည်းအဝေးကို။
ခတ္တမန္ဒူနှင့် Kavre အလိုတော်အတွက်ကျောင်းကအကြားဆွေးနွေးပါ။
လူသားဖိုရမ် (50 အဖွဲ့အစည်းများအကြားစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်) ။
နီပေါအတွက် 1 အဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုများအခြေစိုက်မတိုင်မီတစ်လ Specify ။
တစ်ဦးချင်းစီ 15 ရက်ပေါင်းနှင့်အတူသတင်းစာစာပမြေားအမျိုးသားသတင်းကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လလှုပ်ရှားမှုများပုံမှန်မွမ်းမံ။
Day (၁) - Base Team နီပေါနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသည်။ သတင်းအချက်အလက်ဆွေးနွေးမှုနှင့်အနားယူ။
Day2- Panauti ရှိကမ္ဘာ့မတ်လ၊ ၉း၀၀ မှ ၁၁း၀၀၊ နေ့လည်စာ၊ ၁း၀၀ မှ ၃း၀၀ နာရီအစည်းအဝေး၊ Banepa မြူနီစီပယ်၏ခန်းမတွင်အစည်းအဝေး။ (Kathmandu သို့ပြန်သွားသည်)
ဖြစ်နိုင်လျှင်အဆိုပါ core ကိုအဖွဲ့သည်အခြားမြို့ကိုရွှေ့မည်။
ကျနော်တို့ Bhaktapur နှင့် Kirtipur တူသောမြို့ကြီးများအတွက် Biratnagar နှင့်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်မှန်အတွက်ချီတက်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Day (၃) - မတ်လကမ်ာဘ့ခန်းမ၊
ထိုသူအပေါင်းတို့အဖွဲ့အစည်းများ (ကျောင်း, တက္ကသိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ) ၏ 500 700 လူတွေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။
Day4- အမျိုးသားညီလာခံ (သင် Lumbini တွင်အမျိုးသားစာနယ်ဇင်းမှလက်ဆောင်များနှင့်အတူရှိနေရန်ဖြစ်နိုင်သည်) ။
ကျနော်တို့ Sagarmatha (ဧဝရက်) ၏အခြေစိုက်စခန်းစခန်းပေါ်တိုးတက်မှုအောင်၏ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာတယျ။
နှင့်နေ့ ၅ - N. Delhi-India သို့ဆက်လက်ခရီးဆက်သည်။
Sudhir နှင့် Nailesh နီပေါအတွက်အခြေစိုက်စခန်းရေးအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ရန်နှစ်ဦးစလုံးလျှင်ဒါဟာအကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်
Tulsi Sigdel / Kabir Ranjit ညှိနှိုငျးရေးမှူးနီပေါ
ကီရာလာ, မွန်ဘိုင်း, N. ဒေလီ။
ကျနော်တို့ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများ၏ 200 ရာပေါင်းများစွာလည်းကျောင်းမှာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနှင့်အတူ Kannur အတွက်ကျောင်းအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတအားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့တယ်။
ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှသီဆိုသော“ ငါတို့ကျော်လွှားရလိမ့်မည်” သီချင်းနှင့်အတူစက်ဝိုင်းပြောင်းသွားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ပစ္စည်းများကို 'မလေးရာလမ်' ဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုသည်။ ငါဘရိုရှာအရောင်ပုံနှိပ်ပါပြီ။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ဦး development team Jannie ၏ခရိုင်အတွင်းရှိဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါမဲပေးသူကောင်းမကောင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကား "Malayalam" ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ site ပေါ်တွင်ပေါ်စေ။
ဘယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာငါတို့ပစ္စည်းများနှင့်ဖြစ်ရပ်များ loaded ကြပေမည်။
မွန်ဘိုင်း - အိန္ဒိယ
တာဝန်ရှိ Nailesh ။
ကျနော်တို့ကျောင်းများနှင့်ကောလိပ်များကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ 15,000 NSS ကိုအပြီးမိတ်ဖက် (မဟတ္တမဂန္ဓီနှင့်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်းများ၏လူများကမှုတ်သွင်း) ကို 2WM join ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာမွန်ဘိုင်းကနေ Ekta Parishad နှင့်အဆက်အသွယ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
Ekta Parishad ။ ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ2ªနိုင်ငံတကာညှိနှိုင်းအမျိုးအစားများကတည်းက Ekta Parishad နှင့်ချီတက် Jai Jagat ၏စီစဉ်နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
30 / 1 / 2020 အပေါ်နယူးဒေလီမြို့၌ event: ဂန္ဒီရဲ့သေခြင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့။
ဥရောပ - ၂၉ နိုင်ငံ - မြို့ကြီး ၅၇ မြို့
ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Sandro သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတ်လကိုကြေငြာရန်အတွက် Munich ရှိ“ Friedenkonferenz” တွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတ်လကိုထပ်မံထုတ်ပြန်ရန်အတွက်မြူးနစ်တွင်မေလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စိတ်ကူးမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတ်သည်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် Friedenskonferenz နှင့်တိုက်ဆိုင်သည်။
ဂျာမနီမှာဖြစ်ရပ်များအတွက် 12 နှင့် 14 ဖေဖော်ဝါရီလအကြားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်မြူးနစ်မှ Leipzig (?) သို့မဟုတ် Frankfurt (?) နှင့် 12 ဆက်လက်ဘာလင်ဖို့ 14 ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Sandro, မော်နီကာနဲ့ Harald မြူးနစ်ကနေရွေ့လျားနေသောသူများဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ဂျာမနီမှာ WILPF သို့မဟုတ် ICAN နှင့်အတူရှိ connectives မယ်ဆိုရင်သိလို။
ကျနော်တို့ဂျာမနီမှာအကြောင်းကို 20 လူမျိုး၏အုပ်စုတစုအဆိုပြုနှင့်ဖြစ်ရပ်များပွငျဆငျနိုငျကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
7 အဆိုပါ Friedenskonferenz စဉ်အတွင်းစုဆောင်းအဆက်အသွယ်များစာရင်းကိုပူးတွဲ:
ဘော်ဒိုး, လိုင်ယွန်, Nice, Toulouse, Ivry sur Seine, ပဲရစ်။
ဘော်ဒိုးများတွင်အဖွဲ့ ACDN (နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးများအတွက်နိုင်ငံသားများလှုပ်ရှားမှု) ကိုစီမံကိန်းတွင်ပါဝင်စိတ်ဝင်စားသည်။
အစည်းအဝေးထဲမှာ Rafa ရဲ့ပါဝင်မှုပြီးနောက် Jai Jagat ဥရောပလိုင်ယွန်တှငျကြှနျုပျတို့ MAN (Mouvement Une အခြားရွေးချယ်စရာ Nonviolente လောင်း) နဲ့အကောင်းအဆက်အသွယ်ထူထောင်ကြသည်။
အဲဒီမှာနေတဲ့တင်ဆက်မှုစုစည်းဖို့အမျိုးမျိုးသောအုပ်စုများနှင့် Nice, ဖြစ်ပွားနေသောအဆက်အသွယ်၌တည်၏။
ပဲရစ်ဒေသတွင်း၌ Ivry sur Seine, မြှို့နယ်နှင့်အတူဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအဆက်အသွယ်။
အဆိုပါစီမံကိန်းကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အလိုတော် Silo များရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို "ဟင်းရည်တစ်တန် sommetToulouse မှမတ်လတွင်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်စုပေါင်းထားသော ၁၀၀၁ စုပေါင်းပျော်ရွှင်သောပညာရေးအတွက်ဖန်တီးသူနှင့် Femmes Internationales, mur brisé (FIMB) အဖွဲ့၏ကွန်ယက်နှင့်ပူးပေါင်းရန်စဉ်းစားနေသည်။
ဂျနီဗာ။ ဒါဟာညှိနှိုင်းအမျိုးအစားများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Jai Jagat ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အတူအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်။
အေသင်အတွက်2လူတို့နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလား50ªMarchaများအတွက်ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးကိုရာအရပျကိုယူလိုက်ပါတယ်။
သူတို့က Greek သို့ဘရိုရှာကိုဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။
Trieste, Vicenza, Brescia, Alto Verbano - Varese, Milan, Turin, Genoa, Ventimiglia, Florence, Perugia - Assisi, Livorno, ရောမ၊
ကျနော်တို့ကမ္ဘာ့ဖလား 1Marcha နှင့်အချို့သောတခြားသူတွေရဲ့မြို့ကြီးများကိုဖုံးလွှမ်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ Trieste 26 /2/ 2020 (Trieste Aviano လေတပ်နျူကလီးယားလက်နက်များ၏အခြေစိုက်စခန်း 40 အနီးရှိနျူကလီးယားဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပြီး) ကိုအီတလီနိုင်ငံမှလာမယ့်အပိုင်းနှစ်ပိုင်း eb သို့ခွဲထွက်အဆိုပြု
Trieste - Vicenza (အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ် Ederle နှင့် AFRICOM) မှစတင်သည် - Brescia (Ghedi လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းအနီးရှိအနုမြူလက်နက် ၂၀) - Alto Verbano - Varese - Milan - Turin - Genoa Ventimiglia-Nizza)
၎င်းသည် Trieste - Florence - Perugia - Assisi - Livorno (အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ် Camp Darby အနီးရှိနျူကလီးယားဆိပ်ကမ်း) - ရောမ - Cagliari (ဥရောပတွင်အကြီးမားဆုံးစစ်သေနတ်ပစ်ခတ်မှုအကွာအဝေး) - Avellino - Naples (နျူကလီးယားဆိပ်ကမ်း၊ Joint Force Command) NATO မှ - Reggio Calabria - Palermo (၃/၂၀၂၀၂၀ တွင်ဘာစီလိုနာသို့ထွက်ခွာမည်)
Puglia - Brindisi (နျူကလီးယားဆိပ်ကမ်း) အရှေ့အလယ်ပိုင်း (လက်ဘနွန်) - ဆိုက်ပရပ်စ် (အစိမ်းရောင်လိုင်းပေါ်ဖြစ်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်း) - သူသည်ဂရိနှင့်ဘော်လကန်နိုင်ငံများသို့မြို့တော်ရီဂျီကာ (ခရိုအေးရှား) ရှိကမ္ဘာ့အခြေစိုက်စခန်းနှင့်တွေ့ဆုံမည်လားဆိုသည်ကိုစဉ်းစားနေသည်။ ဥရောပယဉ်ကျေးမှု 2020 သို့မဟုတ်စပိန်ပြန်လည်ပါ။
ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအပြည့်အဝအဆိုပြုထားလမ်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်အအခြေစိုက်အဖွဲ့ (နှင့်မသာ) များအတွက်သင်တန်းသားများကိုရှာတွေ့မှအီတလီနိုင်ငံကနေအထောက်အကူပြုဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာချီမတ်လ၏မူဘောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ မြေထဲပင်လယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပင်လယ်” လှုပ်ရှားမှုကိုမြှင့်တင်နေကြသည်။
အောက်တိုဘာလကုန်အသုံးပြုပုံတစ်လှေဂျီနိုအာနှင့် Nice, ဘာစီလိုနာ, ကျူးနစ်, Palermo, Reggio Calabria, Cagliari, Livorno နှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုထိလိမ့်မယ်ကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများ၏ပင်လယ်ပြင်၏ပြတိုက်အတွက်ဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မည်။
အနောက်မြေထဲပင်လယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ခရီးစဉ်သည်ဂျီနိုဝါတွင်အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ပြီး Civitavecchia ကိုဗာတီကန် (သို့မဟုတ်ရောမရှိ၎င်း၏တည်နေရာများ) သို့ပို့ဆောင်ရန်မြေထဲပင်လယ်အောက်ရှိသစ်ပင်ပန်းမန်တွင်ဓာတ်ပုံပြသသည့်ပြပွဲဖြစ်သော“ ပင်လယ်ပန်း၏လှပသောပန်း” ပြပွဲဖြစ်သည်။
ဒါဟာအောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းကနေအစောပိုင်းနိုဝင်ဘာလ 2019 မှဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
သေးငယ်တဲ့ခြေရာထဲမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား၏ရှေ့မှောက်တွင်အတူ။ ပစ်မှတ်နေ့စွဲ: ဖေဖော်ဝါရီလ / 2020 ၏အဆုံး။
သူတို့ရဲ့လမ်းအပေါ်ဒုတိယကမ်ဘာမတ်လအတွေ့အကြုံများစုဆောင်း, ကွဲပြားခြားနားသောလောကနှင့်ဘာသာရေးဖြစ်ရပ်မှန်များကိုရှာဖွေ, သက်သေခံတော်မူချက်နှင့်လူဗာတီကန်မှာရှိတဲ့ 2020 ၏နွေဦး၌တွေ့ဆုံရန်နိုင်ဘူး။
အခြားအုပ်စုများနှင့်အများပြည်သူနှင့်အတူသြဂုတ်လနှောင်းပိုင်း 2019 အတွက်
သင်ကခရီးတစ်ခုသတင်းစကားပေးနိုင်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ (ကန့်သတ်) နဲ့ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်သူသည်သန့်ရှင်းသောအဘခမည်းတော် (ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis), နေဖြင့်လက်ခံရရှိခံရဖို့အချိန်ဖန်တီးနိုင်ဘူး။
ဘာစီလိုနာ3/3။
Zaragoza5/3။
မက်ဒရစ်6/3Institutional ဧည့်ခံ။
ဒုတိယကမ်ဘာမတ်လမက်ဒရစ်7/3ပိတ်ပွဲဖျော်ဖြေပွဲ။
ထိုအမက်ဒရစ် 8 /38 /3အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့နေ့ဆန္ဒပြပွဲ join ။
ဖင်လန်, ဆွီဒင်, ဒိန်းမတ်, ပိုလန်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ရိုမေးနီးယား, သြစတြီးယား, လူဇင်ဘတ်ဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့
ဘာသာစကားနှင့် ပတ်သက်. ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်ပြုသောအမှုခံနေရဘာသာပြန်ချက်၏အဆင့်ကိုစစျဆေးဖို့မေးမြန်းပါ။
အရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများအသီးအသီးဘာသာစကားမှာဖျော်ဖြေခံရဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာသာပြန်ချက်မှာ web ပေါ်မှာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ်။
အာဖရိက, Albanian အဘိဓါန်, ခြ, အာရဗီ, အဘိဓါန် Armenian-, Azerbaijani-, အဘိဓါန် Basque-, ဘီလာရု, ဘင်္ဂါလီ, ဘော့စျနီးယား, ဘူဂေးရီးယား။
ကာတာလ, Cebuano-, Chichewa, တရုတ် (မျက်မှောက်ရေးရာ), တရုတ် (ရိုးရာ), ကိုရီးယား, Corsican- ခရိုအရှေ, ခကျြ, ဒိန်းမတ်, ဒတျချြ။
Inglés, အက်စပ, Estonian အဘိဓါန်, Euskera ။
ဖိလစျ, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ဖရီစီရ, ဂါလာစီယံ, ဂျြောဂြီယ, ဂျာမန်, ဂရိ, ဂူဂြာရ။
ဟတေီ, ဥစာ, ဟာဝယေံ, ဟီဘရူး, ဟိန္ဒူ, အဘိဓါန် Hmong, ဟနျဂရေီ။
လန်, အစ်ဂဘို, အငျဒိုနီးရှား, အိုငျးရ, အီတလီ, ဂျပန်, ဂျာဗား။
ကန်နာဒါ, Kazakh-, ခမာ, ကိုးရီးယား, (Kurmanji) ဒျ, ခရူဂ။
လာအို, လကျတငျ, အံ, အာနီယံ, အဘိဓါန် Luxembourgish- ။
စီဒိုနီယံ, အာလာဂါစီ, မလေး, မလေးရာလ, မောလ်, ရီ, မာရသီ, လီး, မြန်မာ (ဗမာ) ။
နီပေါ, ဘှ, ဒတျချြ။
ရျှတို, ပါရှနျပိုလနျ, ပျေါတူဂီ, ပနျခြာပီ, ရိုမေးနီးယား, ရုရှ။
Samoan အဘိဓါန်, Scottish Gaelic-, ဆားဗီး, ဆက်ဆိုသို, Shona အဘိဓါန်, စငျဒီ, ဆငျဟာလ, စလိုဗ, စလိုဗေးနီး, ဆိုမာလီ, စပိန်, ဆူဒန်, ဆွာဟီလီ, ဆှီဒငျ။
တာဂှီ, တမီး, ဂု, ထိုင်း, တူရကီ, ယူကရိန်း, ဒူ, အဘိဓါန် Uzbek-, ဗီယက်နမ်, ဝလေ, ဇိုစာ, Yiddish-, ရိုရု, ဇူလူ။
ကျနော်တို့ကို web ၏လက်နက်ကိုင်အဆင့်ပြီးသွားကြသည်။ ဤအဆင့်ပြီးသွားချိန်ကျွန်တော် RRSS ၏ဆောင်ပုဒ်လျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။
လဲ tutorial အပ်လုဒ်ကိုသတင်းအချက်အလက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်သွားပါသောသူတို့အဘို့တီထွင်ပါလိမ့်မည်။
သငျသညျတိုင်းပြည်ကဏ္ဍများကိုတောင်မှမြို့ကြီးများကို enable နိုင်အောင်ဆိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် အရှင်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်ညှိနှိုင်းအမျိုးအစားများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်.
ကျနော်တို့လက်နက်ကိုင်နဲ့ web content တွေကိုတစ်ထောကျပံ့အသင်းရှိသည်။ ကျနော်တို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်စိတ်ဝင်စားပါတီများဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ကျနော်တို့အစီရင်ခံရန်ဒုတိယကမ်ဘာမတ်လကြေးနန်း၏သတင်းအချက်အလက်လိုင်းများ4။
channel ကိုထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ် join သူကိုသစ်ကိုမြင်နိုင်လည်း, ရှေးဦးစွာ မှစ. ဖြစ်ပျက်သောအရေးကြီးသောကိစ္စများနှင့်အရာခပ်သိမ်း၏သမိုင်းသာရှိပါသည်။
ဘာသာစကားနှုန်းမျိုးစုံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်အတူ Contaran ။
တိုက်ကြီးတစ်ခုချင်းစီကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်လက်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် (ဥပမာ - သူတို့သည်ဥရောပနှင့်တောင်အမေရိကတွင်မတ်လတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်)
အုပ်စုသုံးပြီးရန်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့် 1 သို့မဟုတ်2တိုင်းပြည်မန်နေဂျာနှင့်အတူရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်အတူ Self-အလယ်အလတ် Saturation မဟုတ်ကြောင်းကိုရှာဖွေဘို့ရေးဆွဲပါလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ညှိနှိုင်းများ၏မျိုးဖွံ့ဖြိုးအထောက်အကူပြုတစ်ခုတည်းကို virtual အာကာသမှတဆင့် Synergy ထုတ်လုပ်ရန်သကဲ့သို့, ဆက်သွယ်ရေးအဘို့ဤတစ်ခုတည်း entry ကိုအတူ Facebook ကိုအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လကျနော်တို့ရှိသည်ပရိုဖိုင်းကိုမြှင့်ဖို့ကြိုးစားပါ။
အဆိုပါတွေ့ကြုံငါတို့သည်ကျင်းပမည့်မေလ / 2019 အတွက်ဗားရှင်းအသစ်ကိုစဉ်းစားရန်ရှိသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်း၏အောက်ပါအမျိုးအစားများကိုဆှေးနှေးဖို့ Next ကိုကို virtual အစည်းအဝေး